Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Hetsika an-tanana ho an'i Lombok: kaonseritra fiantrana ho an'ireo iharan'ny horohoron-tany
Oktobra 3, 2018
Ho fanehoana ny fahavononany lehibe hamerina ny vondrom-piarahamonina ary hanome fanampiana lehibe ho an'ireo niharam-boina tamin'ny horohoron-tany tany Lombok farany teo, Mövenpick Resort & Spa Jimbaran Bali dia nanao hetsika asa soa nanentana ny fanahy.
Ity hetsika ity dia taorian'ny valinteny nataon'ny Mövenpick Resort & Spa Jimbaran Bali teo aloha taorian'ny horohoron-tany voalohany, izay nisy ekipa mpiasa nitsidika an'i Lombok Avaratra mba hanatitra kojakoja sy fanafody maika.
Ny kaonseran'ny fiantrana Voice of Lombok dia natomboka tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny Elizabeth International School miaraka amin'ny tanjona voalohany hanangonana vola sy fanampiana ireo izay voakasik'ity fiasa voajanahary ity. Maherin'ny 200 ny olona nivory tao amin'ny Akasa Ballroom efa voatendry tsara ho an'ny mozika mampihetsi-po notarihin'i Titi DJ malaza any Indonezia. Niara-niaka-tsehatra teo an-tsehatra tamina mpiangaly mozika malaza maromaro izy, anisan'izany ny mpilalao sodina malaza Gus Teja.
Ilay mpiara-manorina ny Festival Jazz Village Ubud, Astrid Sulaiman, dia nandray anjara tamin'ity fandraisana andraikitra soa ity koa niaraka tamin'ny Jazz Quartet azy. Nisy mozika mitohy avy amin'ny tarika GlamBeer eo an-toerana, ary koa fampisehoana nataon'i Just One Tea izay avy any Lombok indrindra ho an'ny hetsika.
Titi DJ, niaraka tamin'i Djampiro Band, dia tena niaina ny lazan'ny diva tamin'ny fametrahana ny fony sy ny fanahiny tao anaty kaonseritra. Namporisika ny mpanatrika handinika lalina ny paosiny ny komity ary nanao lavanty hira mihitsy aza mba hanangonana vola bebe kokoa. Mpanolotra vintana iray no nanana vintana hiditra tao amin'ny Titi DJ teny an-tsehatra ho an'ny duet sy sary manokana.
Herisetra ara-nofo ataon'ny zaza tsy ampy taona amin'ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo: tompon'andraikitra amin'ny Cruises Royal Caribbean ve?